मल्टिपर्पस फिनान्स कम्पनी लिमिटेड : कम्पनी विश्लेषण (मंगलवार, २५ जेठ २०७८)
कम्पनीको शेयर मूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा ५ दशमलव २३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । शेयर मूल्य प्रतिकित्ता रु. ३४२ पुगेको हो ।
कम्पनीले यसअघि स्थगित रहेको साधारणसभा आगामी असार ६ गते बोलाएको जानकारी गराएको छ । सभा दिनको ११ बजे केन्द्रीय कार्यालय राजविराजमा हुने जानकारी गराएको हो । कम्पनीले कुनै पनि लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेको छैन । सभाले आव ०७६÷७७ को वार्षिक प्रतिवेदन छलफल गरी पारित गर्नेछ ।
साधारणसभा प्रयोजनका लागि शेयरधनी दर्ता पुस्तिका जेठ २४ गते सोमवार बन्द रहेको छ । जेठ २३ गतेसम्म कायम शेयरधनीले साधारणसभामा भाग लिन सक्नेछन् । कम्पनीले चालू आवको तेस्रो त्रैमाससम्म रु. ३० लाख ५३ हजार नाफा कमाएको छ । कम्पनीले गत आवको तेस्रो त्रैमाससम्म रु. ३५ लाख ४ हजार नाफा कमाएको थियो ।
कम्पनीको ६० दिनको कारोबार अवधिको अन्तिम दिनमा सेतो ओपनिङ मारुबोजू बनेको छ । यस्तो आकृतिले बजारमा कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको संकेत गर्छ । आरएसआई ओभरबौज्ट जोन ७२ दशमलव शून्य ७ बिन्दुमा छ ।
यसले शेयर खरिद चाप उच्च रहेको देखाउँछ । कम्पनीको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ११ दशमलव ८२ बिन्दुमा छ । उतारचढाव न्यून रहेको देखाउँछ । यस्तो अवस्थामा जोखिम कम हुन्छ भने प्रतिफल पनि कम हुने गर्दछ ।
त्यस्तै, कम्पनीको मुभिङ एभरेज २६ दिने औसत मूल्यरेखा र १४ दिने औसत मूल्यरेखा एकअर्कामा टाढिएका छन् । हालको मूल्यरेखा यी दुवै मूल्यरेखाभन्दा माथि छ । सोमवारको शेयर मूल्य रु. ३४२ देखि बजारको अवस्था परिवर्तन भई मूल्य सस्तिए रु. ३०७ मा टेवा पाउने देखिन्छ ।